Isityumzi setyathanga silungele ukutyunyuzwa kwamaqhuma kwimveliso yesichumiso esimbaxa. Isetyenziswa kakhulu kwimichiza, kwizinto zokwakha, kwimigodi nakwamanye amashishini. Umatshini usebenzisa iipleyiti zekhabhididi enganyangekiyo ngesantya esiphezulu ngexesha lenkqubo yokutyunyuzwa. Uyilo lwezibuko lezinto ezisengqiqweni, izinto ezityumkileyo zilungile, akukho lula ukunamathela eludongeni, kwaye kulula ukuyicoca.
Inkampani yethu iintlobo ezahlukeneyo umatshini isityumzi inkqubo isichumiso, ezifana urea isityumzi, ikheyusi isityumzi, isando isityumzi, chain ipleyiti isityumzi, kabini ipleyiti isityumzi isityumzi, njl ezahlukeneyo kubo babe isicelo ezahlukeneyo, bonke bephela nga kutyumza amaqhuma, okanye partciles ka isichumisi sibe ngumgubo ocolekileyo.
Ngokutsho kwifom yokufaka, isityumzi chain yahlulwe ngeendlela ezimbini zesakhiwo: nkqo isityumzi isityumzi kunye tyaba isityumzi isityumzi. Isityumzi chain nkqo na ivili elinye, kunye isityumzi tyaba isityumzi plane kabini. Elona candelo liphambili lokusebenza kwesityumzi setyathisi yirotor enentsimbi. Isiphelo esinye sekhonkco sidityaniswe ne-Rotor, kwaye elinye icala lesixokelelwano lixhotyiswe ngentloko yentsimbi eyenziwe ngentsimbi enxibayo. Le isityumzi chain yi isityumzi ifuthe, leyo utyumza ibhloko eziphathekayo ngokusebenzisa ngesantya esiphezulu ujikelezisa chain.
Iindidi ezahlukeneyo zezixhobo zinokuqwalaselwa ngokweemfuno zabathengi.
indawo encinci ehlala abantu kunye nengxolo esezantsi
izixhobo zomatshini ezinzima kunye nokusebenza kakuhle
Ukusebenza ngokulula kunye nokugcinwa okulula
inkqubo otyumza ngokukhawuleza kunye nefom ocoliweyo
Chwetheza LP50 LP60 LP800
amandla 11 18.5 22
ubungakanani 0.65x0.4x0.6m 0.78x0.5x0.6m 1.2x0.65x1.1m
Ubungakanani bokugqibela Ngaphantsi kwe 2mm